Soosaarka ukunta oo kordhay ee digaagga | November 2019
Cornel: Isticmaal, sifooyin faa'iido leh iyo ka horjeeda
Ugu Weyn Ee Soosaarka ukunta oo kordhay ee digaagga
Mawduuca digaagga jiilaalka: sida loo kordhiyo wax soo saarka ukunta
Iyadoo bilawga guga, bannaanka u badan, kuwaas oo leh guri ka baxsan magaalada, digaagga dhirta naftooda. Shimbirahaasi waa kuwo aan la qabin. Mid ka mid ah yoolalka ugu muhiimsan ee daba-galka xoolaha waa in la helo ukun cusub, oo la cuno. Laakiin inta badan dadka waxay ka baxaan digaagga xilliga qaboobaha rajada ah in shimbiruhu ay qaadaan ukumaha si firfircoon sida xilliga qaboobaha.
Qaababka isticmaalka mashiinka dhoobada ah sida dhir
Waxaan ilaalineynaa daikon jiilaalka, cuntada sida caadiga ah
Pelley: sharaxaad, noocyo, beerto iyo daryeel
Waa maxay dill waxtar leh oo miisaanka lumay? Cuntada iyo cuntooyinka cuntadan leh
Beeralayda taranta ganacsiga
Xakamaynta cawska gudaha ee bakaylaha gudaha waa mid ka mid ah hababka lagama maarmaanka ah ee loo hayo. Dhererka cirridka wuxuu si toos ah u saameynayaa caafimaadka xayawaanka. Waxaad la xiriiri kartaa rugta caafimaadka xoolaha ee takhasus leh, adigana waad naftaada u sameyn kartaa gurigaaga, adoo helaya dulqaad iyo horayba loo tababaray. Ma u baahanahay in aan yareeyo cirridka bakeylka? Daqliga duurjoogta ah, cirifka bakeylka ayaa loo baahan yahay markaad orodo dhulka si ay u daboolaan, marka ay si caadi ah u qarinayaan. Read More
Rinda F1 noocyo kala duwan ah: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan koritaanka
Wyandot Chickens: qurux badan iyo wax soo saar
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Soosaarka ukunta oo kordhay ee digaagga 2019